Guddoomiyaha KULMIYE Ee Gobolka Maroodi-jeex oo Tababar u Xidhay Muraaqibiin |
Guddoomiyaha KULMIYE Ee Gobolka Maroodi-jeex oo Tababar u Xidhay Muraaqibiin
Hargeisa(GNN):-Guddoomiyaha xisbiga KULMIYE ee gobolka Maroodi-jeex, Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac (Hadhiye), ayaa maanta tabobar u soo xidhay muraaqibiinta xisbiga KULMIYE uga wakiilka noqonaya goobaha codaynta ee Gabiley.
Munaasibadda Tabobarka muraaqibiinta oo ka qabsoontay magaalada Gabiley, ayaa waxa ka qaybgalay 185 muraaqib oo loo soo xulay inay xisbiga uga wakiil noqdaan goobaha codayntu ka dhacayso ee degmada Gabilay.
Guddoomiyaha xisbiga KULMIYE ee gobolka Maroodi-jeex, guddoomiyaha xisbiga ee Gabiley iyo tabobareyaal ku xeel-dheer shaqada ay muraaqibiintu qabanayso iyo waajibkaadka horyaalla.
Ugu horrayn guddoomiyaha KULMIYE ee Gabiley, Axmed Maxamuud Shirwac oo halkaas kelmedo kooban ka jeediyey, ayaa dhallinyarada muraaqibiinta ah u jeediyey hadallo waano iyo waxsheeg isugu jira.
Waxaanu ku adkeeyey inay ku dedaalaan caddaaladda iyo kasoo dhalaalidda waajibaadka saaran.
Guddoomiyaha xisbiga KULMIYE ee gobolka Maroodi-jeex, Cabdiraxmaan Hadhiye, oo kulanka tabobarka ah si rasmi ah u furay, ayaa la dardaarmay muraaqibiinta maanta tabobarku u furmay, waxana uu ku waaniyey inay karti, dedaal maskax-furnaan ku galaan hawlaha xisbigu u igmaday, kana soo baxaan kaalintooda.